११ अर्ब डलरको ‘नोर्ड स्ट्रिम-२’ ग्यास पाइपलाइन परियोजना, किन रुस र युरोपका लागि महत्वपूर्ण छ ? « Bizkhabar Online
११ अर्ब डलरको ‘नोर्ड स्ट्रिम-२’ ग्यास पाइपलाइन परियोजना, किन रुस र युरोपका लागि महत्वपूर्ण छ ?
23 February, 2022 2:37 pm
काठमाडौं । रुस र युक्रेनबीच जारी तनाव (रुस–युक्रेन संकट) बीच जर्मनीको एउटा निर्णयले रुसलाई ठूलो झट्का दिएको छ । जर्मनीले नोर्ड स्ट्रिम २ ग्यास पाइपलाइनको प्रमाणीकरण प्रक्रिया रोकेको छ । जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले यो घोषणा गरेका हुन् । यो ११ अर्ब डलरको (करीब १३ खर्ब रुपैयाँ) ग्यास पाइपलाइन (रूस–जर्मनी ग्यास पाइपलाइन) रुसको साइबेरियाबाट बाल्टिक सागर हुँदै जर्मनीसम्म जानेछ । यो ग्यास पाइपलाइन रूस र युरोपका लागि ठूलो महत्वको छ ।
नोर्ड स्ट्रिम–२ ले रूस र जर्मनीबीच पहिले नै रहेको नोर्ड स्ट्रिम–१ को क्षमता लगभग दोब्बर बनाउनेछ । यही कारणले गर्दा रुसले नर्ड स्ट्रिम २ पाइपलाइनमार्फत आफ्नो ग्यास युरोपका अन्य मुलुकमा पुर्याउने सपना देखिरहेको थियो । रुसले युरोपमा प्राकृतिक ग्यासको एक तिहाइ उत्पादन गर्छ र विश्वव्यापी तेल उत्पादनको करिब १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । युरोप ग्याँसको लागि रूसमा धेरै निर्भर छ र नोर्ड स्ट्रिम–२ परियोजनाको प्रमाणीकरणमा रोकले युरोपको ऊर्जा बजारहरूमा तनाव निम्त्याउन सक्ने बताइएको छ ।
नोर्ड स्ट्रिम–२ परियोजना के हो ?
नोर्ड स्ट्रिम–२ ग्यास पाइपलाइन रूसको पश्चिमी भागबाट बाल्टिक सागर हुँदै उत्तरपूर्वी जर्मनीसम्म पुग्ने दोस्रो प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन हो । नोर्ड स्ट्रिम १ ग्यास पाइपलाइन सन् २०११ मा सञ्चालनमा आएको थियो । नयाँ ग्यास पाइपलाइनको वार्षिक ५५ अर्ब घनमिटर ग्यास ढुवानी गर्ने क्षमता रहेको बताइएको छ । १२३० किलोमिटर लामो नर्ड स्ट्रिम २ पाइपलाइनको निर्माण वर्ष २०१८ मा सुरु भएर र सेप्टेम्बर २०२१ मा सम्पन्न भएको हो । तर, सञ्चालन अनुमतिपत्र अलपत्र परेकाले नोर्ड स्ट्रिम २ बाट ग्यास पठाउने काम सुरु हुन सकेको छैन ।
युरोपेललाई किफायती ग्यास
रसिया र जर्मनीले नोर्ड स्ट्रिम २ ग्यास पाइपलाइनले युरोपेली घरहरूमा किफायती मूल्यमा ग्यास पुर्याउन सहयोग पुग्ने कुरालाई स्वीकार गर्छन । यो परियोजना रुसको आम्दानीको प्रमुख स्रोत पनि बन्न गइरहेको थियो । नोर्ड स्ट्रिम २ ग्यास पाइपलाइनको सहयोगमा रुसले युक्रेनलाई बाइपास गरेर युरोपेली देशहरूमा ग्यास ढुवानी गर्न चाहेको विज्ञहरूको दाबी छ । यससँगै रुसलाई २ अर्ब डलरको पारवहन शुल्क लाग्ने छैन । युरोपेली देशहरूमा जाने ग्यास पाइपलाइन युक्रेनबाटै जान्छ । यद्यपि, जर्मनीले सधैं नोर्ड स्ट्रिम २ ग्यास पाइपलाइन विशुद्ध रूपमा व्यावसायिक परियोजना भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले युक्रेनमा रुसको कारवाहीको जवाफमा आफ्नो सरकारले यो कदम युक्रेन संकटलाई लिएर पश्चिमी देशहरूले रुसविरुद्ध दण्डात्मक कदम चालेको बताएका छन् । जर्मनीको निर्णयमा रुसी संघको सुरक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेवले ट्वीटमार्फत भनेका छन्, ‘यो साहसी नयाँ संसारमा स्वागत छ जहाँ युरोपेलीहरूले छिट्टै १ घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको लागि २ युरो तिर्नेछन् !’
ग्यासको मूल्य बढ्न सक्छ
मेदवेदेवका ट्वीटहरूमा आधारित रहेर हेर्दा यसले संकेत गर्दछ कि युरोपको लागि ग्यासको मूल्यहरू सन् २०२१ को अन्त्यदेखि नदेखिएको संकटको स्तरमा फर्कन सक्छ । युरोपमा प्राकृतिक ग्यासको मूल्यले यस जाडोमा नयाँ रेकर्ड बनाएको छ र रुस र युक्रेनबीचको तनावले युरोपेली उपभोक्ताहरूलाई थप समस्या खडा गर्न सक्छ । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार जर्मनीका अर्थमन्त्री रोबर्ट ह्याबेकले नोर्ड स्ट्रिम २ बिना पनि जर्मनीको ग्यास आपूर्ति सुरक्षित रहेको बताएका छन् । तर, छोटो अवधिमा ग्यासको मूल्य अझै बढ्ने सम्भावना छ । नोर्ड स्ट्रिम–२ पाइपलाइनको आधा हिस्सा रूसी राज्य ग्यास कम्पनी ग्याजप्रोमको स्वामित्वमा छ । बाँकी आधा शेल, अस्ट्रियाको ओएमभी, फ्रान्सको इन्जी, जर्मनीको युनिपेर, र विन्टरसेल डिइएबीच रहेको छ । अनुवाद गरिएको